Global Voices teny Malagasy · 14 Janoary 2019
Tantara tamin'ny 14 Janoary 2019
Zambia 14 Janoary 2019
Nilaza tamin'ny parlemanta ny Filoha Lefitra Zambiana, Dr. Guy Scott, fa hifaly raha toa ka hikatona ny vohikala Zambian Watchdog. Ny hariva nialoha ny fanambarany, lasa nanano-sarotra tampoka ny fidirana ny ZW. Nitatitra ireo mpamaky avy any ivelany fa tafiditra soa aman-tsara raha toa kosa tsy tafiditra ireo tao Zambia.
Maoritania 14 Janoary 2019
Ejipta: Nolavina ny fangatahan'ilay mpitsara hanakanana ireo tranonkala
Ejipta 14 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nandà ny fangatahana nataon'ny mpitsara Abdel Fattah Mourad mba hanakanana tranonkala sy bilaogy miisa 51 heverina fa maniratsira ny fahamendrehan'ny fanjakana sy mandrahona ny tombontsoan'ny Ejipta ny Komitin'ny Vaomieram-panjakana ao Egypta. Mandritra izany, niato ny fanadihadiana natao tamin'ny bilaogera Amr Gharbia,...
Mediam-bahoaka 14 Janoary 2019
Faly ny Global Voices Advocacy mamoaka ny torolalana Mirroring a Censored WordPress Blog amin'ny dikanteny Frantsay.
Monaco: Tranonkala voampanga ho nanala baraka ny Lehiben'ny Fanjakana
Monaco 14 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Tao Monaco (Fanjakam-printsy ao Monaco), voalaza fa nanasongadina sariitatra nanala baraka sy nanaraby ny Printsy Albert II sy ireo mpanao politika hafa ao an-toerana i Marc Giacone, tompon-tranonkala vaovao fanesoana iray ary mety hisazy enim-bolana an-tranomaizina sy handoa lamandy mitentina 1.500 €...
Navotsotra ilay bilaogera Koetiana Bashar Al-Sayegh!
Koety 14 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Notaterina fa navotsotra i Bashar Al-Sayegh, ilay bilaogera Koesiana izay nosamborina ‘noho ny fanehoan-kevitra navoakan'ny olona iray tsy fantatra anarana tao amin'ny sehany fifanakalozan-kevitra.